Kathmanduma Ek Din | Pilgrims Book House
Kathmanduma Ek Din
Title:Kathmanduma Ek Din
Author:Shivani Singh Tharu
“डरसित भिड, बाँच त आँखा फारेर । जहाँ नजर थोडै झुकिगो त सम्झ, तिम्रो खून सफेद भइहाल्यो । याद राख्नू, डरले तिमीलाई पूरा मान्छे हुनबाट रोक्छ । ”०६४ भदौ १० मा बम विस्फोट गर्ने उद्देश्यले घुर्ना राम अर्थात् ‘प्यान्थर’ काठमाडौं आउँछ । मधेस जनतान्त्रिक सेना र दलित प्यान्थर मोर्चाको सहकार्यमा हुने यो विस्फोट विगतका भन्दा भयानक हुँदै छ । तर जुन उद्देश्यका लागि घुर्नाले यत्रो जोखिम लिँदै छ, त्यसको परिणाम भोग्न ऊ साँच्चै तयार छ ? जोसँग मिलेर ऊ बम वस्फोट गर्न जाँदै छ, के उनीहरुमा पूरै भर पर्न सक्छ ? बम विस्फोटको योजना जतिजति अघि बढ्छ, घुर्ना रामदेखि ‘प्यान्थर’सम्मको रुपान्तरणका पत्र एकएक खुल्दै आउँछन् । तर उसलाई थाहा छैन, भविष्यतिर अघि बढिराखेका पाइलालाई आफ्नै विगतले पछ्याउँदै आइराखेको । बम विस्फोटको दिन घुर्नाको जिन्दगीको नयाँ सुरुवात हुनेछ वा अन्तिम ? काठमाडौंमा एक दिन त्यही दिनको कथा हो ।
Shivani Singh Tharu
शिवानी सिंह थारु सञ्चारकर्मी हुन् । नेपाल टेलिभिजनको कार्यक्रम मेरो गीत मेरो सन्देश र मूल्याङ्कनकी प्रस्तोता रहिसकेकी उनले बिबिसीको रेडियो नाटक कथा मीठो सारङ्गीकोमा लेखक र निर्देशकका रुपमा काम गरेकी छिन् । बिबिसीकै रेडियो नाटक कथामालाको लेखन र कथावाचन पनि गरेकी छिन् । उनले लेखेको नाटक भर्चुअल रियालिटी भारतको नेसनल स्कुल अफ ड्रामाको नवौं नाट्य महोत्सवमा नेपालको एक्टर्स स्टुडियोले मञ्चन गरिसकेको छ । काठमाडौंमा एक दिन उनको पहिलो उपन्यास हो ।